१३ अंकलाई किन अशुभ मानिन्छ? - टि. एल. एन पोस्ट
Home Uncategorized १३ अंकलाई किन अशुभ मानिन्छ?
१३ अंकलाई किन अशुभ मानिन्छ?
संसारका धेरै देशमा १३ अंकलाई अशुभ मानिन्छ । त्यही भएर कतिपय देशका होटेलमा १३ नम्बरको कोठा नै हुँदैन ।शुक्रवार १३ तारिख प–यो भने पश्चिमीहरू असाध्यै अशुभ मान्छन् । यस्तो संयोग परेको दिन अमेरिकामा करीब नौ अर्ब डलरको उत्पादनमा असर पुग्ने तथ्यांक छ ।मनोविज्ञानले १३ अंकप्रतिको डरलाई ट्रिस्काइडेकाफोयिबा नामकरण गर्ने गरेको छ । तेह्र तारिखको दिन पश्चिममा सबभन्दा बढी दुर्घटना हुन्छन् ।
तेह्रलाई यसरी अशुभ मान्ने प्रचलनको शुरुवात बेबिलोनियन सभ्यताको कोड अफ हम्मुराबीबाट भएको मानिन्छ । यी कोडहरू त्यतिखेरका कानून हुन् । यिनमा १३ नम्बर नभएकाले त्यो अंक अशुभ मानियो ।इतिहासकार चाहिँ यो कुतर्क भएको विश्वास गर्छन् । अब छुट्यो होला नि १३ अंक लेख्न, के को शुभ अशुभको कुरा हुनु भन्छन् उनीहरू ।
क्रिस्चियनहरू चाहिँ बोक्सीहरूको १३ जनाको समूह हुने मान्यता राख्छन् । अनि बाइबलमा जीसस क्राइस्टलाई धोका दिने जुडास अन्तिम भोजमा भाग लिने तेह्रौं व्यक्ति थिए भनी उल्लेख छ ।प्राचीन क्रिस्चियन ग्रन्थहरूका अनुसार येशुलाई शुक्रवारको दिन क्रसमा झुण्ड्याइएको थियो अनि इभले एडमलाई शुक्रवारकै दिन वर्जित फल खुवाएकी थिइन् । केनले एबललाई शुक्रवार हत्या गरेका थिए । यसैकारण शुक्रवार राम्रो दिन मानिन्न अनि त्यसमा १३ अंक थपिँदा त फ्राइडे द थर्टिन्थ खराबै हुने भयो क्रिस्चियनहरूका लागि ।
Previous article‘निफ्रा’ को शेयर मूल्यमा लगातार तेस्रो दिन सकारात्मक सर्किट,हेर्नुहोस कति पुग्यो शेयर मूल्य?
Next articleचौथो दिन पनि निफ्राको १ मिनेटमै सकारात्मक सर्किट, हेर्नुहोस् कति पुग्यो आज शेयर मूल्य
कोरोना संक्रमणका कारण बिद्यालय संचालन बन्द गर्ने कि नगर्ने बिषयमा निस्कियो यस्तो निष्कर्ष